VaRoma 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Tsamba kuvaRoma 14:1-23
Musaita kuti vamwe vagumburwe (13-18)
Itai kuti pave nerugare uye kubatana (19-23)
14 Gamuchirai munhu asina kusimba pakutenda,+ asi musamutonga pamusoro pemaonero aanoita zvinhu.* 2 Mumwe munhu ane kutenda kunomubvumira kudya zvinhu zvese, asi munhu asina kusimba anodya muriwo chete. 3 Munhu anodya ngaarege kuzvidza asingadyi, uye munhu asingadyi ngaarege kutonga anodya,+ nekuti Mwari akamugamuchira. 4 Ndiwe ani unotonga mushandi wemumwe munhu?+ Iye anomira kana kuti anowa pamberi patenzi wake.+ Achamiswa, nekuti Jehovha* anogona kumumisa. 5 Mumwe munhu anoti rimwe zuva rinopfuura rimwe;+ mumwe munhu anoti rimwe zuva rakafanana nemamwe ese;+ mumwe nemumwe ngaave nechokwadi nezvaanosarudza. 6 Uya anochengeta zuva anorichengeta achiitira Jehovha.* Uya anodyawo, anodya achiitira Jehovha,* nekuti anoonga Mwari;+ uye uya asingadyi anorega kudya achiitira Jehovha,* asi anoonga Mwari.+ 7 Chokwadi ndechekuti hapana kana mumwe wedu anozviraramira,+ uye hapana anozvifira. 8 Nekuti kana tichirarama, tinoraramira Jehovha,*+ uye kana tichifa, tinofira Jehovha.* Saka kana tichirarama uye kana tichifa, tiri vaJehovha.*+ 9 Nekuti Kristu akafira izvozvi akavazve mupenyu, kuti ave Ishe pamusoro pevakafa nevapenyu.+ 10 Asi iwe unotongerei hama yako?+ Kana kuti unoshorerei hama yako? Nekuti tese tichamira pamberi pechigaro chaMwari chekutonga.+ 11 Nekuti zvakanyorwa kuti: “‘Neupenyu hwangu,’+ anodaro Jehovha,* ‘mabvi ese achandipfugamira, uye rurimi rwese ruchabvuma Mwari pachena.’”+ 12 Saka mumwe nemumwe wedu achazvidavirira kuna Mwari.+ 13 Saka ngatichiregai kutongana,+ asi ngatiedzei kusaisa pamberi pehama chinhu chinoigumbura kana chinoitadzisa kufamba.+ 14 Ndinoziva uye ndine chokwadi munaShe Jesu kuti hapana chinhu chakasviba pachacho;+ chinongoitika ndechekuti kana munhu akafunga kuti chimwe chinhu chakasviba, chinobva chava chakasviba kwaari. 15 Nekuti kana hama yako ichigumburwa nezvekudya, hausisiri kufamba maererano nerudo.+ Usaparadza uyo akafirwa naKristu nezvekudya zvako.+ 16 Saka musaita kuti zvakanaka zvamunoita zvitaurwe nezvazvo sezvakaipa. 17 Nekuti Umambo hwaMwari hahurevi kudya nekunwa,+ asi hunoreva kururama nerugare nemufaro zvinounzwa nemweya mutsvene. 18 Nekuti munhu wese anoshandira Kristu saizvozvo anogamuchirwa naMwari uye anofarirwa nevanhu. 19 Saka ngatirambei tichiita zvinhu zvinoita kuti pave nerugare+ uye zvinoita kuti tivakane.+ 20 Regai kuputsa basa raMwari nekuda kwezvekudya chete.+ Ichokwadi kuti zvinhu zvese zvakachena, asi zvakaipa kuti munhu azvidye kana zvichigumbura mumwe.+ 21 Zviri nani kurega kudya nyama kana kunwa waini kana kuti kuita chimwe chinhu chinogumbura hama yako.+ 22 Kutenda kwauinako, ngakuve kwako wega pamberi paMwari. Anofara munhu asingazvitongesi pazvinhu zvaanoti zvakanaka. 23 Asi kana asina chokwadi nazvo, atopiwa mhosva kana akadya, nekuti haadyi zvichibva pakutenda. Zvinhu zvese zvisingabvi pakutenda chivi.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “pemibvunzo inomuka mumwoyo.”